युगसम्बाद साप्ताहिक - नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त
Monday, 09.23.2019, 10:48am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 07.22.2014, 09:52am (GMT+5.5)
बि.सं. १८७१ असार २९ गते पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मावतीदेवीका पुत्रको रूपमा तनहूँको रम्घामा जन्मेका अचार्यले आफ्ना हजुरबुबा श्रीकृष्ण आचार्यबाट औपचारिक शिक्षा पाएका थिए । एउटा घाँसीको प्रेरणाबाट साहित्य लेखनको प्रेरणा पाएका आचार्य प्रश्नोत्तर, वधूशिक्षा लगायतका कृतिहरू लेखेका छन् । आचार्यका पाण्डुलिपिलाई संग्रह गरेर मोतिराम भट्टले पुस्तकाकारमा प्रकाशित गरेपछि उनी साहित्यमा चिनिएका हुन । आचार्यको निधन बि.सं. १९२६ मा भएको थियो । उनले नेपाली भाषामा साहित्य लेखन थालनी गरेदेखि नै नेपाली भाषा अरु फैलिन थालेको हो ।
नेपाली भाषालाई सबै नेपालीको साझा र भाषाको रुपमा विकसित गरी साहित्य सिर्जनाको ढोका खोल्ने भानुभक्त आचार्यले भाषिक एकता कायम गरेकोमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा कुन विमति नरहे पनि कतिपयहरू यसलाई लादिएको भाषा भन्छन् । विशेषतः आदिवासी जनजाति भनिने कतिपय नेताहरू नेपाली भाषालाई खस आर्य जातिको भाषाका रुपमा चित्रित गर्ने गरेका छन् । उनीहरू संस्कृत भाषालाई पनि बाहुनको भाषा भनी दुत्कार्छन् । सशस्त्र जनयुद्धताका संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालय र संस्कृतका पुस्तक जलाउने काम भयो ।
भानुभक्तको जन्मजयन्ती नेपालमा मात्र हैन भारतका विभिन्न शहरहरूमा पनि धुमधामका साथ मनाइन्छ । नेपाली भाषाहरूको बाहुल्य रहेका क्षेत्रहरूमा भानुको शालिक खडा गरिएका छन् । भानुभक्तले नेपाली भाषा साहित्यका लागि दिएको योगदान अमूल्य हुन्थेन भने विदेशमा बस्ने हरेक जातजातिका नेपालीहरूले भानुजयन्ती असार नलाग्दैदेखि साउन नसकिंदासम्म मनाउने थिएनन् । तर नेपालभित्र भने भनुलाई रत्न मान्नुको साटो दुत्कार्ने गरिएको अकल्पनीय परिस्थिति छ । विदेशी भूमिमा समेत सम्मानित भानु नेपालमै अपमानित हुनुपरेको छ । त्यसैले त उनको शालिक तोडियो ।
त्यसो त सरकारी तवरमा पनि खासै ठूलो कार्यक्रम गरिन्न तर यसपटक उनको २ सय १ औं जन्मजयन्ती पारेर ७० वर्ष उमेर पार गरेका ७ दर्जन हाराहारीका साहित्यकारहरूलाई सम्मानित गरियो । त्यस्तै वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाउने भनिए पनि यी कार्यहरू औपचारिकता निर्वाह र बजेट सक्ने मेसो मात्र बनिरहेका छन् । त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई भानु जयन्तीकै अवसर पारेर राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार दिइयो ।
नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि सरकारी तवरबाट केही भएको छैन । भानु जयन्तीका दिन सामान्य कविता गोष्ठीहरू हुनेबाहेक भानुभक्तलाई खासै सम्झने प्रचलन हराउँदै गएको छ । तर नेपाली भाषीहरूको बाहुय रहेको भारतका विभिन्न शहरहरूमा धुमधामका साथ भानु जयन्ती मनाइन्छ । ती शहरहरूमा राज्यको तर्फबाटै लाखौं खर्च गरेर नेपाली भाषा साहित्यका विषयमा गोष्ठी र सभाहरूको आयोजना गरिन्छन् ।
मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसंगै भाषिक सद्भाव टुटाउने प्रयास भैरहेको छ । नेपाली भाषालाई खस जातिको भाषाका रुपमा चित्रित गर्दै यो भाषा राष्ट्र भाषा हुन नसक्ने जिकिर गर्नेहरू छन् । तर उनीहरू स्वयं नेपाली भाषालाई नेपाली भाषामै गाली गर्छन् । भाषा, संस्कृति र धर्म हाम्रो पहिचान हो । नेपालमा बोलिने सबै भाषा नेपालीको भाषा हो भने यहाँका सबै धर्म, संस्कृति नेपालीकै हो । यो कुनै जात विशेषको मात्र होइन । जहाँसम्म नेपाली भाषा राष्ट्र भाषाका रुपमा रहने कि नरहने भन्ने छ– योभन्दा बढी बोलिने भाषा अर्काे कुन छ त ? जुन देशमा सबैभन्दा बढी जुन भाषा बोलिन्छ त्यही भाषा त्यहाँको राष्ट्र भाषा हुन्छ, त्यो त्यस मुलुकको सम्पर्क भाषा हुन्छ ।
नेपालमा नेपाली भाषा हिमालदेखि तराईसम्मको सम्पर्क भाषा भएकाले सरकारी कामकाजमा यही भाषा प्रचलनमा छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यही भाषाले मान्यता पाएको छ । नेपाली भाषा विश्वव्यापी रुपमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ । इन्टरनेट इञ्जिन गुगलले नेपाली भाषाको अनुवाद गर्ने पद्धति स्थापित गरेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपाली भाषा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू आउने क्रम बढ्दो छ ।
विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली भाषा साहित्यसंग सम्बन्धित संस्था खुलेका छन । त्यतिकै संख्यामा संचारका साधनहरू चलेका छन् । नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि विदेशमा रहेका जुनसुकै जातजातिका भए पनि उनीहरू दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन् तर नेपालभित्र भने नेपाली भाषालाई दुत्कार्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । भाषिक आन्दोलन वा सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा परिचय मेट्ने दुस्साहस हुन लागेको त हैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपाली भाषा कुनै जात विशेषको भाषा हुन्थ्यो भने यसले अन्तर्राष्टिय जगतमा फैलिने अवसर नै पाउने थिएन । नेपाली भाषा यतिबेला विश्वव्यापी भएको छ । नेपालभित्र भाषिक विवाद मच्चिए पनि विदेशमा भने नेपाली भाषाप्रति सबैको समान सम्मान छ । नेपालमा जात विशेषको भाषाका रुपमा कतिपयले चित्रित गर्ने गरे पनि विदेशी भूमिमा भने त्यस्तो अवस्था छैन । विश्वका दर्जनौं मुलुकबाट नेपाली भाषामा साहित्यिक तथा समाचारमूलक पत्रपत्रिकाहरू संचालन भैरहेका छन् भने अनलाइन खबर पत्रिकाहरू पनि व्यापक रुपमा संचालित छन् । यसको श्रेय आदिकवि भानुभक्तलाई नै जान्छ ।